Izifundo Zifundo ZeBhayibhile Ukuze Ucebise Izifundo Zakho
Iingcebiso Zokunceda Ixesha Lakho Lokufunda IBhayibheli
Ngaphambi kokuba ufunde iBhayi- bhile qwalasela ezi ngcebiso ukucebisa ixesha lakho lokufunda iBhayibhile.
Esi sibonelelo asiqinisekanga ukuba siqhube isifundo seBhayibhile. Ngokuchaseneyo, ukufunda iBhayibhile kufuneka kube lula. Akufuneki ukulungiswa okukhulu, kodwa kukho izinto ezimbalwa onokuzenza ukuphucula umgangatho wexesha lakho lokufunda iBhayibhile, okwenza ube noluntu kwaye lunentsingiselo.
Yazi Iisiseko Zokholo LobuKristu
Okokuqala, ungathanda ukuchitha ixesha ukwazi i siseko sesholo.
Ngaba uyaqonda ukuba kuthetha ukuthini ukuba ngumlandeli kaKristu? Iingcamango eziphosakeleyo malunga nobuKristu zingalithintela ukufunda kwakho iBhayibhile kwaye uphucule ukukhula kokomoya .
Kwakhona, awukwazi ukuba ubuKristu buyinkokeli enkulu kwihlabathi namhlanje. IBhayibhile yincwadi ethengiswa kakhulu kwi-US minyaka yonke, kwaye malunga neezigidi ezingama-72 zeBhayibhile zi sasazwa emhlabeni wonke ngonyaka. Ngoko ndiquke iinkcukacha ezimbalwa zokukunika ukubukeka kwehlabathi lobuKristu kunye nokuxabisa okukhulu kwimixholo yalo ecacileyo-iBhayibhile.
UbuKristu namhlanje-jikelele jikelele kunye neenkcukacha zobuKristu
Khetha iBhayibhile efanelekileyo
Emva koko uza kufuna ukukhetha iBhayibhile efanelekileyo ngokufanelekileyo kunye nezidingo zakho. Kwabanye kubalulekile ukukhetha inguqulelo yeBhayibhile eyenziwa ngumfundisi wakho. Oku kwenza kube lula ukulandela kunye nemiyalezo yeveki xa umfundisi wakho eshumayela okanye efundisa.
Kwabanye iBhayibhile yokufunda kunye neenkcukacha ezifanelekileyo zokufunda zibalulekile. Unokukhetha iBhayibhile yokuthandaza . Yazi nje ukuba iBhayibhile esemgangathweni ifuna ukuba utyalo-mali. Kubalulekile ukwenza kuqala uphando lwakho, uze ukhethe iBhayibhile yakho. Awufuni ukuchitha imali eninzi uze ufumane ukuba iBhayibhile ayiyona nto ibhetele kuwe.
IBhayibhile ezili-10 eziphezulu
Iimibhalo ZeBhayibhile Ezigqatso
Iingcebiso zokukhetha iBhayibhile efanelekileyo
Funda Ukufunda IBhayibhile
Ngoku ulungele ukufunda indlela yokufunda iBhayibhile rhoqo. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu ebomini bemihla ngemihla ichitha ixesha lokufunda iLizwi likaThixo. Kwaye kukho iindlela ezininzi zokufunda iBhayibhile. Ndibonelela enye indlela kukunceda uqalise. Le ndlela ikhethekileyo kubaqalayo; nangona kunjalo, inokuthi ibhekiswe kuyo nayiphi na inqanaba lokufunda. Njengoko ukhululekile ngakumbi ngokufundisisa iBhayibhile, uya kuqalisa ukuphuhlisa iindlela zakho kwaye ufumene izixhobo ezizithandayo eziza kwenza ukufunda kwakho iBhayibhile ibe yintle kwaye inentsingiselo.
Indlela Yokufunda IBhayibhile
Indlela yokudala iSicwangciso soBuhla ngemihla
Izixhobo ezongeziweyo zokufunda iBhayibhile
Ekugqibeleni, njengoko uhlakulela zakho iindlela zokufunda zeBhayibhile, unokufuna ukufaka ezinye izixhobo eziza kukunceda ukuba uqhubeke kwaye uziqonde ngakumbi kwaye usebenzise iZwi likaThixo . Isicwangciso sokufunda seBhayibhile kubalulekile ukuba uhlale uqhubeka kwaye uqeqesha njengoko wenza umkhuba wokufunda kwiBhayibhile yonke. Namhlanje ubuninzi beengxelo zeBhayibhile kunye neeprogram zesofthiwe zeBhayibhile ziyafumaneka. Ezi ziphakamiso zenzelwe ukukunceda ukhethe izixhobo ezifanelekileyo.
IziCwangciso zokuFunda zeBhayibhile
Iingxelo eziphezulu zeBhayibhile
UFileo: Uthando lobuzalwana eBhayibhileni
Iingqungquthela kwiincwadi zeVangeli zeBombongo likaYesu
Kutheni iTabernakele ibalulekile namhlanje?
I-Amazing Biltmore Stick kunye neTranger Tool
IYunivesithi yase-Illinois e-Springfield Admissions
Indlela yokuPhumelela - Iidolophu kwiNgqiqo
Indlela Yokubamba Isiko Sokusila Umlilo WaseMidsummer ebusuku
Trompe l'Oeil Iziqhelo zobugcisa kwiYiso
Iingxaki zeFrench Franchise Fatigue
WhatsApp Ukuqala Ukuhlawula 'Abasebenzisi abangasebenziyo?'
Quotes Mae Jemison